Famehana ara-pahasalamana :: Mitohy dimy ambin’ny folo andro ny fihibohana • AoRaha
Hanohy ny fihibohana ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro i Madagasikara, indrindra ho an’ireo faritra telo (Analamanga, Matsiatra Ambony ary Atsinanana izay efa misy an’ireo olona marary vokatry ny fifampikasohana. “Mba tsy hahavery an-javony ny ezaka rehetra natao”, araka ny namba­ran’ ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Rajoelina Andry, no anton’izany. Hizara roa anefa ny fepetra horaisina amin’izany.
Ho an’i Madagasikara iray manontolo dia mbola mikatona ny fianarana, fiangonana, toerana famoriam-bahoaka hatramin’ny 19 avrily. Voarara ny famoriam-bahoaka mihoatra ny dimampolo sy ny fifamezivezen’ny olona sy ny fiara amin’ny 8 ora alina hatramin’ny 5 maraina.
Mitovy amin’ny fepetra efa niainan’ny vahoaka malagasy nandritra izay tapa-bolana nisian’ny hamehana ara-pahasalamana teto amintsika izay ihany ny fanda­minana mipetraka ho an’ Analamanga sy Atsinanana ary Matsiatra Ambony, izay ahitana an’ireo olona marary vokatry ny fifampikasohana. Anisan’izany ny famerana ny isan’ireo olona tsy maintsy mivoaka ny trano, ny fanajana ny elanelana iray metatra sy ny fanaovana tampim-bava, ny fihibohana ao an-trano, ny fanajana ny fahadiovana sy ny fanasana tanana matetika amin’ny savony na amin’ny « Gel » famonoana tsimok’ aretina sy ny sisa. “Hana­kaiky ny vahoaka kokoa ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy maintsy manao tambim-bava avokoa rehefa mivoaka ny trano na any am-piasana”, hoy ny Filoha.
Ho an’ireo olona eto an-drenivohitra na any amin’ny faritra dia afaka mody izy ireo, hoy ny Filoha. Hanomboka rahampitso hatramin’ny alakamisy ny fahafahan’izy ireny mody. Hanomboka amin’ny 5 ora maraina hatramin’ny 11 ora antoandro no hahafahan’izy ireny mamonjy an’ireo toeram-piantsonana izy ireny. “Mila manao arovava ireo mpandeha ary hisy famendrahana fanafody amin’ny fiara sy ny toby fiantsonana. Hoferana ihany koa ny sidina anatiny mampitohy an’Anta­nanarivo amin’ireo faritra mbola tsy voakasika”, hoy hatrany izy.
Notapahan’ny Filankevitry ny minisitra, tamin’ny sabotsy lasa teo, kosa ny fanalavana dimy amby folo andro, nanomboka tamin’ny 4 avrily 2020, ny hamehana ara-pahasalamana eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Nahazoana fankatoavana avy amin’ireo filohan’andrimpanjakana telo, ny filohan’ny Antenimie­rampirenena sy ny Antenimi­e­randoholona ary ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) ny fampiharana an’io fanapahan-kevitra io.
Mikasika ny fifamoivoi­zana dia mitohy ny fiatoan’ny fiara fitateram-bahoaka amin’ny asany. “Ireo fiara mpitatitra entana sy ireo fiaran’olon-tsotra nahazo alalana avy amin’ny sampan-draharaha miadidy izany etsy Andohantapenaka irery no mahazo mifamezivezy.
Olona roa, fara fahabetsany, no mahazo mitaingina fiara iray”, araka ny nolazain-dRakotondrazafy Lalatiana tamin’ny fandaharana mano­kana nivantana tamin’ny haino aman-jery, omaly.
Hitohy ny fiahiana ara-tsosialy avy amin’ny fitondram-panjakana. Hisy ny fizarana “Vatsy tsinjo” ho an’ireo beantitra sy manan-kilema ary ireo olona marefo ara-pivelomana. Hisy kosa ny fizarana tampim-bava maimaim­poana ho an’ny tokantrano tsirairay.
Finoana sy fankalazana :: Hitsena ny fetin’ny Paska any an-tokantrano ireo mpino
Ady amin’ny valanaretina :: Hihetsika hanampy ny fanjakana ny fiarahamonim-pirenena